Umaki: sesha i-infographic | Martech Zone
Maka: sesha i-infographic
Kade sikhahlela kahle muva nje sikuxwayisa ngamasu wokusebenzisa injini ezosesheni azokufaka enkingeni. Noma isayithi lakho lingahlupheki namuhla, iGoogle iyaqhubeka nokuguqula ama-algorithms ayo futhi ihlole okusha okuzokubamba kusasa. Ungalingeki ugaxekile izinjini zokusesha… zizokuthola. Le Search Infographic nge-SEO Book ikuhamba ngamasu ahlukene okufanele uwagweme
Kulabo kini abakade baba abafundi besikhathi eside, nizobona ukuthi ngisuse amawijethi webha eseceleni ye-MyBlogLog neBlogCatalog. Nginenkinga yokuwasusa isikhathi esithile. Ngikujabulele ukubona ubuso babantu abavakashele ibhulogi yami kaningi - kwenze abafundi babukeke njengabantu bangempela kunezibalo kuGoogle Analytics. Ngenze ukuhlaziywa okuphelele komthombo ngamunye nokuthi bahambisa kanjani ithrafikhi esizeni sami kanye